Wararkii Ugu Danbeeyey Ee Wargeysyada Qaarada Yurub Ka Qoreen Xanuunka Corona Virus Ee Saamaynta Ku Yeeshay Kubada Cagta? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Wargaysyada ugu caansan kubbada cagta ee dalalka Spain iyo Italy ayaa si wayn wax uga qoray saamaynta kubbada cagta uu ku yeeshay cudurka Corona Virus waxayna ka soo hor jeedsadeen in garoomo madhan lagu ciyaaro kulamada kubbada cagta.
Kulamo badan oo kale ayuu saamayn ku yeeshay cudurka Corona Virus waxaana sii kordhaya walaaca laga qabo in gabi ahaanba uu saamayn xun ku yeesho inta xili ciyaareedkan ka hadhay ee horyaalada kala duwan ee Yurub.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobaynaa ciwaanadii iyo sawiradii ay qaar ka mid ah wargaysada ugu caansan ee kubbada cagtu ay ka sameeyeen kulamada garoomada madhan lagu ciyaarayo ee saamaynta Corona Virus.
Wargayska AS ee ka soo baxa magaalada Madrid ee caasimada dalka Spain ayaa soo qaatay sawir dareen badan muujinaya waxaana la soo qaaday sawirka ciyaartoy in uu dhintay u muuqda oo ay kuwo kale xadhku ku jiidayaan, waxaana la soo raaciyay kuraash madhan oo hal sawir oo madow la soo dul dhigay.
Waxaana sawirkan dareenka badan muujinaya la soo raaciyay qoraal lagu yidhi: “Waa Sportskii oo bilaa ruux ama naf ah” iyada oo ay ka xun yihiin isla markaana ay ka soo horjeedaan in garoomo madhan lagu ciyaaro kulamada kubbada cagta.
Wargayska Sport ee ka soo baxa magaalada Barcelona ee isla dalka Spain ayaa isna soo qaatay saiirka garoon madhan oo uu hal qof soo dhex fadhiyo waxaana ciwaan loo dhigay: “Kubbada cagta oo la agoomeeyay” waxayna markeeda ka soo horjeedsadeen kulamada garoomada madhan lagu ciyaarayo.
Wargayska caanka ah ee Corriere dello Sport oo ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa isna wax badan ka qoray cudurka Corona Virus ee saamaynta ugu xun ku yeeshay horyaalka Talyaaniga.
Corriere dello Sport ayaa soo jeediyay dhawr qorshe oo ay doonayaan in lagu go’aamiyo xili ciyaareedka Serie A waxayna soo jeediyeen in Euro 2020 dib loo dhigo si kulamada xili ciyaareedkan ee baaqday loogu dhamaystiri karo inta u dhexaysa April ilaa May dhamaadkeeda.
Waxa kale oo uu Corriere dello Sport soo jeediyay in haddii kale Juventus loo caleemo saaro koobka Serie A maadaama oo ay hogaanka hayaan waxa kale oo ay soo jeediyeen in la ciyaaro kulamo play-off ah oo loo qabto kooxaha ugu sareeya ee wali horyaalka rajada ka qaba.
Laakiin wargayska Mundo Deportivo oo isna ka soo baxa magaalada Barcelona ayaa qoraal kooban ku cabiray daroonkooda garoomada madhan waxayna soo qaateen quful wayn oo ay silsilad ku xidheen, sawirka taageere calan sare u haya oo ay lagu dul qoray ” Joojiya” oo ay ula jeedaan in aan garoomada la xidhin, waxayna qoraalka kale ee qufulka ku sheegeen “Waa la qufulay ama la xidhay” iyaga oo garoomada albaabada loo xidhay ka soo horjeeda.